Kedu ihe kacha mma ndị Amazon kacha mma?
Amazon bụ ntaneti kachasị ọnụahịa zuru ụwa ọnụ ebe ọ bụla na ngwaahịa ọ bụla dị n'usoro nsonaazụ ọchụchọ. Amazon ji ogo algorithms dị iche iche chọpụta ihe kpatara nke a ma ọ bụ na ngwaahịa ahụ na-etinye na otu akwụkwọ ọchụchọ. Otu n'ime ihe algorithms kachasị mara amara Amazon bụ Ịkpọ ọkwa (Bestsellers Rank) - portable grain monitoring.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú Amazon Selling Rank na-arụ ọrụ. Ọ ga-enye gị ohere ịmepụta mgbasa ozi ahịa dị irè ma wepụ ndị asọmpi gị.
Tupu anyị aga n'ihu na njirimara kacha mma nke Amazon, M ga-achọ ịma na Amazon anaghị ekpughe ihe nzuzo si eme ka ọnụahịa kachasị mma. Ọ bụ ya mere ihe ọmụma niile dị na obere mkpirikpi a dabeere na nchọpụta m na ahụmahụ m.
Olee otú ahia Amazon si arụ ọrụ?
Mgbe ị na-agagharị na ngwaahịa ngwaahịa Amazon, ị nwere ike ịhụ mpaghara "Product Details". Nkebi nke a na-egosi Ọkwá Ndị Nlekọta Ahịa Amazon. A na-emelite ọkwa a na nkeji oge ma jikọta ọnụ ọgụgụ nke ere ahịa nke ngwaahịa a n'oge na-adịbeghị anya, gbasara ngwaahịa ndị ọzọ dị na mpaghara a. Ụlọ ahịa Amazon Bestsellers na-ewerekwa akaụntụ data nke akụkọ ihe mere eme na ihe dịgasị iche iche omume.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nke mbụ pụtara na ngwaahịa a na-ere n'oge na-adịbeghị anya karịa ngwaahịa ọ bụla na otu ụdị.
Ọ bụ echiche na-ezighị ezi na ahịa Amazon na-adabere n'ahịa, ma na ọnụ ọgụgụ na ogo nke nyocha ma ọ bụ ọkwa. N'ikwu eziokwu, ọ bụ naanị ahịa (nke dị ugbu a na n'oge na-adịbeghị anya). Ọ bụ ya mere na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ịmepụta ọtụtụ ihe adịgboroja ma ọ bụ nlezianya a kwụrụ ụgwọ na ngwaahịa gị, karịsịa mgbe ikpeazụ Amazon algorithm melite dịka ihe niile na-enweghị ike nweta nyochaa kwesịrị ewepụ ozugbo. Ya mere, anyị nwere ike ịsị na Ama Amaahịa Ndị Ahịa na-egosi otú e si ere ngwaahịa ụfọdụ n'oge na-adịbeghị anya na ngwaahịa ndị ọzọ n'otu ụdị.
Ụgha ọzọ a na-ahụkarị anyị ga-apụ bụ na ngwaahịa anaghị enwe mmetụta ozugbo na nkwụsị ahịa. Dị ka m kwuru na mbụ, Amazon na-emezi algọridim ya n'otu oge. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike iwepụtakwu oge n'etiti mmụba nke ahịa na nhazi ọkwa. Dịka iwu, oge a abụghị ihe karịrị awa atọ. Ihe niile dị mkpa bụ ọnụ ọgụgụ ahịa ndị metụtara ngwaahịa ndị ọzọ n'otu ụdị.
Ọzọkwa, ọ bara uru ịkọwa na mmụba na ahịa adịghị apụta ụda ka mma. Ọ bụ ma eleghị anya otu n'ime ihe ndị kasị arụ ụka banyere amaokwu Amazon. Ahịa Amazon na-adabere kpọmkwem na ngwaahịa ndị ọzọ na otu ụdị. Ọ pụtara na mmụba na ahịa nanị ya ezughị iji meziwanye ọnọdụ gị. Nrịbawanye dị ịrịba ama na ọnụ ọgụgụ ahịa nwere ike iwetara gị ọkwa kacha mma. Ị kwesịrị ị na-ere ahịa karịa ndị mbịazụ ọzọ na mpaghara gị. Yabụ, ọ bụrụ na ị hụ ọkwa nke ahịa na niche gị na ọchịchọ dị elu maka ngwaahịa gị, ọ pụtaghị na ị bụ onye kachasị ahịa na ụdị gị. O nwekwara ike igosi na ụfọdụ n'ime ndị asọmpi gị na-amalite ịzụ ihe.